Ukurhoxa | Law & More BV
Blog » Ukurhoxa
Ngaphantsi kweemeko ezithile, ukupheliswa kwesivumelwano sengqesho, okanye ukurhoxa, kuyinto enqwenelekayo. Inokuba njalo imeko ukuba omabini amaqela acinga ukurhoxa kwaye agqibe ngesivumelwano sokupheliswa koku. Unokufunda ngakumbi malunga nokupheliswa kwemvumelwano kunye nokupheliswa kwesivumelwano kwindawo yethu: Ukuchithwa.site. Ukongeza, ukupheliswa kwekhontrakthi yengqesho kungathathelwa ingqalelo kunqweneleka ukuba kuphela elinye lamaqela afuna ukurhoxa. Umzekelo, umqeshwa unokuziva isidingo, ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, ukuphelisa ikhontrakthi yengqesho ngokuchasene nentando yelinye iqela, umqeshi. Umqeshwa uneendlela ezininzi anokukhetha kuzo: ukuphelisa ikhontrakthi yengqesho ngesaziso okanye ayiphelise ngokufaka isicelo sokuchithwa enkundleni. Kuzo zombini ezi meko, nangona kunjalo, umqeshwa makayikhumbule imida ethile ebonisa ukuba ezi ndawo zinendawo efanelekileyo yokuyeka emsebenzini.
Ukupheliswa kwesivumelwano sengqesho ngesaziso. Ukupheliswa kwelinye icala kwesivumelwano sengqesho kukwabizwa ngokuba kukupheliswa kwesaziso. Ngaba umqeshwa ukhetha le ndlela yokuyeka emsebenzini? Emva koko umthetho umisela ixesha lesaziso elisemthethweni ekufuneka liqwalaselwe ngumqeshwa. Nokuba lithathe ixesha elingakanani na isivumelwano, eli xesha lesaziso liqhele ukuba yinyanga enye kumqeshwa. Amaqela avunyelwe ukuphambuka kweli xesha lesaziso kwisivumelwano sengqesho. Nangona kunjalo, ukuba ixesha eliza kugcinwa ngumqeshwa liyandiswa, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuqinisekisa ukuba ixesha alidluli kumda weenyanga ezintandathu. Ngaba umqeshwa uyaligcina ixesha ekuvunyelwene ngalo? Kwimeko apho, ukupheliswa kuya kwenzeka ngasekupheleni kwenyanga kwaye ingqesho iya kuphela ngosuku lokugqibela lwenyanga yekhalenda. Ukuba umqeshwa akathobeli ixesha lesaziso ekuvunyelwene ngaso, ukupheliswa kwesaziso akuqhelekanga okanye ngamanye amazwi unoxanduva. Kwimeko apho, isaziso sokupheliswa ngumqeshwa siya kuyiphelisa ikhontrakthi yengqesho. Nangona kunjalo, umqeshi akasenatyala, kwaye umqeshwa angatyala ityala. Le mbuyekezo idla ngokuba nemali elingana nomvuzo wenxalenye yexesha lesaziso elingakhange liqatshelwe.
Ukupheliswa kwesivumelwano sengqesho yinkundla. Ukongeza ekupheliseni ikhontrakthi yengqesho ngokunika isaziso, umqeshwa uhlala enethuba lokufaka isicelo enkundleni ukuze kuziswe isivumelwano sengqesho. Olu khetho lomqeshwa lukhetha enye indlela ukugxothwa kwangoko kwaye ayinakukhutshelwa ngaphandle ngokwesivumelwano. Ngaba umqeshwa ukhetha le ndlela yokuphelisa? Emva koko kufuneka aqinisekise isicelo sokuchithwa ngokubhalwa kunye nezizathu eziqinisekileyo njengoko kubhekisiwe kwinqaku 7: 679 okanye inqaku 7: 685 umhlathi 2 weKhowudi yaseDatshi. Izizathu ezingxamisekileyo ngokubanzi ziqondwa ukuba zithetha (utshintsho) kwiimeko ezibangela ukuba umqeshwa angalindelwa ngokufanelekileyo ukuba avumele ikhontrakthi yengqesho ukuba iqhubeke. Ngaba iimeko ezinjalo ziyasebenza kwaye ngaba iNkundla yesiThili iyasinika isicelo somqeshwa? Kwimeko apho, iNkundla yesiThili yesithili ingayiphelisa ikhontrakthi yengqesho kwangoko okanye emva komhla, kodwa hayi ngokubuyela umva. Ngaba unobangela ongxamisekileyo ubangelwa yinjongo okanye impazamo yomqeshi? Emva koko umqeshwa angafaka ibango lembuyekezo.
Ngaba umqeshwa uthathe isigqibo sokurhoxa emsebenzini kunye nokuphelisa isivumelwano sengqesho kunye nomqeshi wakhe? Ke oku kuhlala kwenzeka ngokubhaliweyo ngesaziso sokupheliswa okanye ukurhoxa. Kwileta elolu hlobo kulisiko ukuxela igama lomqeshwa nalowo umjongileyo kunye naxa umqeshwa ephelisa isivumelwano. Ukwenzela ukuthintela ukungavisisani okungeyomfuneko nomqeshi, kuyacetyiswa ukuba umqeshwa avale ileta yokumyekisa okanye yokuyeka emsebenzini kunye nesicelo sokuqinisekisa ukuba uyifumene loo leta aze ayithumele nge-imeyili okanye ngeposi ebhalisiweyo.
Nangona kunjalo, ukuhlawulwa okubhaliweyo kokugxothwa akunyanzelekanga kwaye kuhlala kusebenza ngeenjongo zolawulo. Emva kwayo yonke loo nto, ukupheliswa yinto engekho semthethweni yomthetho kwaye ke nayo inokwenziwa ngomlomo. Kuyenzeka ke ukuba umqeshwa azise umqeshi wakhe ngamazwi kuphela kwincoko yokupheliswa kwesivumelwano sengqesho kwaye ke agxothwe. Nangona kunjalo, indlela enjalo yokurhoxa ineengxaki ezininzi, ezinje ngokungaqiniseki malunga nokuba ixesha lesaziso liqala nini. Ngapha koko, ayimniki umqeshwa iphepha-mvume lokuba emva koko abuyele kwiingxelo zakhe kwaye ke ngokulula aphephe ukurhoxa.
Ngaba unyanzelekile ukuphanda umqeshi?
Ngaba umqeshwa uyarhoxa? Umthetho wamatyala ubonakalisile ukuba kwimeko apho umqeshi akanakuthemba ngokulula okanye ngokukhawuleza okukhulu ukuba yile nto kanye ayifunayo umqeshwa. Ngokubanzi, kuye kufuneke ukuba iingxelo okanye indlela yokuziphatha komqeshwa ibonakalise ngokucacileyo nangokucacileyo injongo yakhe yokugxotha. Ngamanye amaxesha uphando olwenziwa ngumqeshi luyafuneka. Ngokuqinisekileyo, kwimeko yokushiya umsebenzi ngomlomo, umqeshi unoxanduva lokuphanda, ngokweNkundla ePhakamileyo yaseDatshi. Ngokwezi zinto zilandelayo, umqeshi kufuneka aqale aphande ukuba ingaba ukugxothwa bekuyinjongo yomqeshwa wakhe na:
Isimo sengqondo somqeshwa
Indlela umqeshwa aziqonda ngayo iziphumo
Ixesha ekufuneka umqeshwa eliqwalasele ngokutsha isigqibo sakhe
Xa uphendula umbuzo wokuba ingaba umqeshwa ebefuna ukuwuphelisa na umsebenzi, kusetyenziswa umgangatho oqinileyo. Ukuba, emva kophando olwenziwe ngumqeshi, kubonakala ngathi ukugxothwa kwakungeyonjongo yomqeshi, kwaye umqeshi akanakho, ngokomgaqo, ukuphikisa umqeshwa. Ngokuqinisekileyo akunjalo xa "ukubuyisela" umqeshwa engonzakalisi umqeshi. Kwimeko apho, akukho mbuzo wokugxothwa okanye wokupheliswa kwesivumelwano sengqesho ngumqeshwa.
Amanqaku okuqwalaselwa kwimeko yokurhoxa
Ngaba umqeshwa uthathe isigqibo sokuqhubeka nokuyeka emsebenzini? Ke kukwabubulumko ukunikela ingqalelo kwezi ngongoma zilandelayo:
Ikhefu. Kungenzeka ukuba umqeshwa useneentsuku ezininzi zeholide ezikhoyo. Ngaba umqeshwa uza kuyigxotha? Kwimeko apho, umqeshwa angathatha iintsuku ezishiyekileyo zeholide ngokubonisana okanye ahlawulwe ngomhla wokugxothwa. Ngaba umqeshwa ukhetha ukuthatha iintsuku zakhe zeholide? Umqeshi kufuneka avume koku. Umqeshi angayala iholide ukuba kukho izizathu ezifanelekileyo zokwenza oko. Ngaphandle koko umqeshwa uya kubhatalwa ngeentsuku zakhe zeholide. Isixa esiza endaweni yaso sinokufunyanwa kwi-invoyisi yokugqibela.
Izibonelelo. Umsebenzi opheliswe ikhontrakthi yengqesho uyakuxhomekeka ngokufanelekileyo kuMthetho we-Inshurensi yokuNgaphangeli ukuze aphile. Nangona kunjalo, isizathu kunye nendlela esapheliswa ngayo ikhontrakthi yengqesho iya kuba nefuthe kubango lokungaphangeli. Ukuba umsebenzi uyarhoxa emsebenzini, umqeshwa akanalungelo lokufumana izibonelelo zokungaqeshwa.
Ngaba ungumqeshwa kwaye ngaba ufuna ukurhoxa? Emva koko qhagamshelana Law & More. at Law & More Siyaqonda ukuba ukugxothwa lelinye lawona manyathelo afikelela kude kumthetho wezengqesho kwaye kuneziphumo ezifikelela kude. Kungenxa yoko le nto sithatha indlela yobuqu kwaye sinokuvavanya imeko yakho kunye namathuba kunye nawe. Unokufumana ulwazi ngakumbi malunga nokugxothwa kunye neenkonzo zethu kwindawo yethu: Ukuchithwa.site.
Post edlulileyo Uxanduva kumqeshi nakumqeshwa ngokoMthetho weeMeko zokuSebenza